Forex Signals တွေကဘာလဲ - ကုန်သွယ်မှုလေ့လာပါ။
Forex Signal ဆိုတာဘာလဲ
တစ်ခုမှာသေချာပေါက်ဖြစ်၏ လူတိုင်းသည် forex ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည် - အားလုံးသည်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများ၊ မရေမတွက်နိုင်သောပညာရေးအရင်းအမြစ်များ၊ အလွန်မြန်သော streaming နည်းပညာနှင့်အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာစနစ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ Forex trading သည်လူတိုင်းအတွက်အလွယ်တကူခလုတ်နှိပ်ရုံဖြင့်ကုန်သွယ်မှုမှအမြတ်အစွန်းများများရရှိရန်အမြတ်အစွန်းများရရှိနိုင်သည့်အပြင်ကျွမ်းကျင်မှုအပြင်ဗဟုသုတရှိသူများသာဖြစ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှု၏ Forex trading အချက်အလက်များတွင်ကူညီရန်အခြေခံအချို့ကိုနားလည်ခြင်းဖြင့် ဦး စွာစတင်ကြပါစို့။
Forex Trading Signal ဆိုတာဘာလဲ။
Forex trading အချက်ပြများကိုအခြေခံအားဖြင့် Forex ကုန်သည်များက ၄ င်းတို့၏ကုန်သွယ်ရေးတွင်အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ကူညီရန်အသုံးပြုသည်။ Forex ကုန်သည်တစ်ယောက်အနေဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော tool သည် forex trading signal ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအခမဲ့ဖြစ်နိုင်သလိုအခကြေးငွေလည်းပေးနိုင်သည်။
Forex signal သည်စာသားအခြေပြုသတင်းအချက်အလက်မျှတမှုအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပြီး၊ လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးမှသင်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုအပြင်မှန်ကန်သောကုန်သွယ်မှုရလဒ်များကိုခန့်မှန်းရန်ကုန်သည်များကိုကူညီခြင်း။
မတူညီသော forex အချက်ပြအမျိုးအစားများရှိပါသလား။
အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Forex အချက်ပြများကိုလွတ်လပ်စွာဝယ်ယူနိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တိုးမြှင့်စေရန်အချို့ကအခမဲ့နှင့်ငွေပေးချေသည့်အချက်ပြမှုနှစ်ခုလုံးကိုမှာယူနိုင်သည်။ ဖြစ်ပေါ်ပုံ၏ပုံစံသည် Forex အချက်ပြမှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
ထို့ကြောင့်ထိုကိစ္စအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လက်စွဲအခမဲ့ forex အချက်အလက်များနှင့်အလိုအလျောက် forex အချက်အလက်များပါဝင်သော forex အချက်ပြနှစ်မျိုးရှိသည်။
အခမဲ့ Forex Signal ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ
Forex အချက်ပြမှုများကို Forex ပေးသူများထံမှရရှိသည်။ နားလည်နိုင်သည်မှာမှန်ကန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်ရှေ့သို့ခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင် forex အချက်ပြမှုကိုမည်သို့ရယူရမည်ဆိုသည်ကိုမမီ၊ အချက်ပြပေးသူတွင်မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရမည်ကိုလေ့လာသင့်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုသူတို့လေ့လာခြင်းသည်၎င်းတို့ရရှိသောအမြတ်အစွန်းကိုအကဲဖြတ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သုတေသနပြုပါ။ သူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသို့ ၀ င်ပါ။ လစဉ်စာရင်းသွင်းစဉ်သူတို့ပေးသောအချက်ပြမှု၏အောင်မြင်မှုနှုန်းကိုကြည့်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ပြောသမျှကိုခင်ဗျားယုံဖို့မလိုပါဘူး၊ myfxbook.com platform သည်ပံ့ပိုးသူများ၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးရလဒ်များကိုစစ်ဆေးသည်။
ကောင်းမွန်သောပံ့ပိုးသူသည်ဖုံးကွယ်စရာဘာမျှမရှိပါ။ သင်တွေ့ကြုံရမည့်အရာ၏စာသားသည်သင်စတင်ရန်ကောင်းမွန်သောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ပို့လိုက်သောအချက်ပြအမျိုးအစားများနှင့်အချက်ပြချက်များနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုကောင်းလာသည်နှင့်အမျှပံ့ပိုးသူ၏အချိန်ဇုန်ကိုလည်းလေ့လာသင့်သည်။ အားလုံးပြီးပြီဆိုလျှင်သင်၏ forex အချက်ပြမှုကိုလက်ခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းပုံစံနှင့် တွဲဖက်၍ ပံ့ပိုးသူကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုလျှင်အချက်ပြဖြန့်ဖြူးပုံကိုရှေ့ဆက်သွားပါ။
Forex အချက်အလက်များပေးပို့ရာတွင်အီးမေးလ်အသုံးပြုခြင်းသည်သိသာထင်ရှားသည့်အကျိုးကျေးဇူးရှိပြီး၊ အီးမေးလ်တစ်ခုမှလက်ခံရရှိထားသောအချက်ပြအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
Telegram များသည် messaging application ကဲ့သို့သိပ်မများလှသော်လည်း၎င်းသည် client များသို့အချက်ပြဖြန့်ဝေရာတွင်ပံ့ပိုးသူများကကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
Viber / WhatsApp ကို
Forex signal ပေးသူများအကြားရေပန်းစားသောနောက်ထပ် platform တစ်ခုမှာ Viber သို့မဟုတ် WhatsApp ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ယခုအခါအသုံးများသောကြောင့်အသေးစိတ်စျေးကွက်ဝေဖန်ချက်များ၊ ဇယားများနှင့်အချက်ပြချက်များကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အရသင်သည်သင်၏အချက်ပြစာများကိုအီးမေးလ်သို့သို့မဟုတ်ဖုန်းမှစာသားမက်ဆေ့ခ်ျဖြင့်တိုက်ရိုက်လက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုခြေရာခံနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ သတိပေးချက်ကိုသတိမထားမိခြင်းသို့မဟုတ်နောက်ကျလွန်းခြင်းကြောင့်သင်ရောင်း / ၀ ယ်ခြင်းအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မသွားစေရန်သေချာစေသည်။
ရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းများထဲမှတစ်ခုမှာ forex trading အချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံသည့်အနေအထားကိုဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ FX အချက်ပြချက်များကိုဖတ်ရှုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်နောက်တစ်ဆင့်မှာဥယျာဉ်၌လမ်းလျှောက်ရုံမျှသာဖြစ်သည်၊
ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကပေးသူရဲ့ signal channel သို့ log ။ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြေးနန်းချန်နယ်
ကုန်သွယ် Forex ၏အကောင်းအဆိုး cons
အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိနေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ Forex စျေးကွက်သည်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အများဆုံးငွေဖြစ်လွယ်မှုကိုပေးသည်။ ကောင်းတဲ့အချက်ကအဲဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အဓိကကျတဲ့ငွေကြေးထဲကနေရာတစ်ခုကိုအချိန်မရွေးထွက်နိုင်အောင်လုပ်တာပါ။
ထို့အပြင် Forex စျေးကွက်သည်တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီနှင့်တစ်ပတ်လျှင်ငါးရက်နေ့စဉ်သြစတြေးလျတွင် New York ၌အဆုံးသတ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစင်တာများစွာရှိပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလွန်လွယ်ကူလွယ်ကူစေသည်။
ငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းစေရန်စီးပွားရေးအခြေခံများအပြင်ညွှန်းကိန်းများကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ငွေကြေးတန်ဖိုးများကိုမောင်းနှင်စေသောအခြေခံများအားလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်၊ သင်သည်နိုင်ငံအမျိုးမျိုးအတွက်စီးပွားရေးအခြေအနေများစွာကိုနားလည်ရန်ကျယ်ပြန့်သောပုံရိပ်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။
leverage အသုံးပြုခြင်းနှင့်အကောင့်တစ်ခုတွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်ရရှိရန်အတွက်သြဇာကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုန်သည်များအတွက် Forex အချက်ပြ
အဓိကအားဖြင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုအဓိကအာရုံစိုက်သောကုန်သည်များအတွက်, Forex အချက်ပြများသည်အရောင်းအ ၀ ယ်အတွေ့အကြုံအတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ အချက်ပြမှုများစွာသည်အခြေခံအကြောင်းရင်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအချက်ပြမှုများကိုအသုံးပြုသော TA ကုန်သည်များသည်ထိုအခြေခံများကိုလည်းဖော်ပြလိမ့်မည်။
Forex ပေးသူအများစုသည်စျေးနှုန်းပုံစံများအပေါ် အခြေခံ၍ သူတို့၏အကြံဥာဏ်များကိုလှုံ့ဆော်ကြသည်။ အများအားဖြင့်ပုံစံများသည်ထောက်ခံမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအဆင့်များပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်အခြားနည်းပညာညွှန်းကိန်းများ၊ စျေးနှုန်းပုံစံများ / ဖွဲ့စည်းပုံများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
စာသားအရ, ဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - အခြေပြု signal ကိုမျိုးဆက်၏ပြီးပြည့်စုံသောအဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဦး ရေပြားများအတွက် Forex အချက်ပြ
ရေရှည်ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုအများစုသည်အမြတ်အစွန်းအတွက်ရာနှင့်ချီသောအမြတ်အစွန်းများကိုသာရည်ရွယ်လေ့ရှိကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် pips အနည်းငယ်ကိုသာအခြေချသော Forex signal provider များရှိသည်။
ထိုပံ့ပိုးသူအမျိုးအစားများသည်တိုတောင်းသော FX အချက်ပြမှုကို ဦး တည်။ ဦး ရေပြားကိုကောင်းမွန်စေသည်။
သို့သော် signal-based ဦး ရေပြား၏အဓိက applications များကဘာတွေလဲ?
ရေရှည်အချက်ပြမှုမပြေလည်အောင်မသေချာမရေရာတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်။ ထို့ကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောအချိန်များတွင်, ကအခြားရွေးချယ်စရာချဉ်းကပ်မှုပေးထားပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံကုန်သည်များသည်စျေးကွက်ကိုပုံဖော်။ မရနိုင်ပါ။
ထို့အပြင်ခိုင်မာသည့်ကာလရှည်ကြာစွာတည်ရှိနေပြီးစျေးကွက်များကထိုကာလများအတွင်းလှုပ်ရှားမှုသည်နှေးကွေးနေသည်။ ယခုအချိန်သည်စိတ်မရှည်ရသောကုန်သည်များသည်တစ်မိနစ်အတွင်းစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲအပေါ် FX signal ကိုအခြေခံသော ဦး ရေပြားပေါ်သို့ပြန်လည်ကျဆင်းသွားနိုင်သည့်အချိန်အခါများဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ ဦး ရေပြားအချက်ပြမှု၏တိုတောင်းသောသဘောသဘာဝအရ၎င်းတို့သည်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ်တွင်သာအခြေခံထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အခြေခံကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပါထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလိုင်းများ၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားသောလှို့ဝိုင်းများကဲ့သို့သောညွှန်းကိန်းများကိုစီးပွားရေးသတင်းများ၊ ပံ့ပိုးမှုနှင့်ခုခံမှုအဆင့်များ၊
ကုန်သွယ်ရန် Forex သည်မလွယ်ကူသော်လည်းအောင်မြင်ရန်ခက်ခဲသည်။ သင်ဘာလုပ်ဖို့လိုသည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သော်လည်းဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သင်လုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
ယခုတွင် FX အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်အောင်မြင်ရန်“ လျှို့ဝှက်ချက်များ” ကိုဒီမှာတွေ့ရသည်။
ပထမအချက်မှာကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသာရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်လုပ်ရမယ့်အရာကသန့်ရှင်းပြီးရိုးရှင်းစွာထားရန်။ သင်၏ဇယားတွင်ညွှန်းကိန်း ၁၅ ခုထက် ပို၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုမထိခိုက်ပါစေနှင့်။
ဒုတိယအချက်မှာမျှော်လင့်ချက်များသည်လက်တွေ့ကျသင့်သည်။ အောင်မြင်သော Forex trading အတွက်လက်တွေ့မျှော်လင့်ချက်များသည်အလွန်အရေးပါသည်။ အကြောင်းပြချက်သည်မျှော်လင့်ချက်များသည်ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းရရန်ရှာဖွေသည့်အန္တရာယ်များသောလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အတင်းအဓမ္မစေနိုင်သည်။ လက်တွေ့မကျသောမျှော်လင့်ချက်များသည်အဆုံး၌ဖြစ်စေ၊ နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်စေဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမှာသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အချက်အလက်များကိုသင်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကိစ္စအတွက် forex trading ပျက်ကွက်မှုအတွက်အကြီးမားဆုံးတရားခံများဖြစ်သောစိတ်ခံစားမှုသာမကစိတ်မရှည်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုကန့်သတ်ရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစွမ်းရည်လိုအပ်သည်။
ကုန်သည်များအတွက်ငွေကြေးအကန့်အသတ်ရှိသူများ၊ လွှဲကုန်သွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ခြင်းတို့သည်အခြားသောစျေးကွက်များထက်အနည်းငယ်မျှသော FX ဈေးကွက်တွင်လွယ်ကူသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူရေရှည်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းရှိသူများနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောရန်ပုံငွေများအတွက်ရေရှည်အခြေခံများဖြင့်အမြတ်အစွန်းသည်။
ယခုသင်မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နှင့် Forex trading အချက်အလက်များမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိရှိလာပြီဖြစ်သောကြောင့်ဘောလုံးကိုရှေ့သို့တိုး။ အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ပညာရှိစွာရွေးချယ်ပါ။ အမြတ်အစွန်းအပေါ်သိသိသာသာနှင့်ချက်ချင်းသေချာဘို့ Excellent က signal ကိုဝန်ဆောင်မှု
သင် Forex ကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်ကြွယ်ဝနိုင်ပါသလား?
နေ့ကုန်သွယ်မှုစည်းမျဉ်းများသည် Forex နှင့်သက်ဆိုင်ပါသလား။
အကောင်းဆုံး FX အချက်ပြတွေကဘာတွေလဲ။
Last Updated: ဒီဇင်ဘာလတွင် 5th, 2019